Soo Iibso 7 In1 Qalabka Badbaadinta Isdhaafsiga ee Foorida Compass Heerkulbeeg Tooshka Iftiinka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
7 In1 Qalabka Isku-dhafan ee Isku-dhafan (Multifunctional Survival Kit)
$ 7.20 qiimaha joogtada ah $ 10.29
7 In1 Qalabka Isku-dhafan ee Isku-dhafan (Multifunctional Survival Kit) gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Midab: Bixinta Midabka Random.
Cabbirka: Dhererka: 9.8cm / 3.9 ", Ballaca: 3cm / 1.2".
Xidhmada waxaa kujira ： 1PCS x New Survival Whistle
7 kii 1 ee foorida badbaada oo leh keydinta taraqyada, heerkulbeegga (Fahrenheit & Celsius), weyneeyaha 5X, muraayad loogu talagalay calaamadeynta, toosh LED toosh ah iyo jiheeye.
Aalad badbaado muhiim u ah kaamam.
Khafiifa, fududahay in la isticmaalo oo la isku halleyn karo.
Moodhka tooshka ee LED-ka wuxuu leeyahay badhanka badhanka wuxuuna adeegsadaa unugyada beddeli kara 2x CR1220 unugyada Lithium (lagu daray). Lanyard ayaa lagu daray.
Fiiro gaar ah: Fadlan u oggolow khaladka 1-3mm sabab u ah cabbiraadda gacanta. Fadlan hubso inaadan ka fikirin ka hor intaadan dalban. Midabada ayaa yeelan kara kala duwanaan sida muujinta kala duwanaanta, Fadlan fahanso.
Qalabka badbaadada weyn. Tayada waa wanaagsan tahay, waxaan ku nuux nuuxsaday in heerkulbeega uu ku jiray Celsius halkii uu ka ahaan lahaa Fahrenheit. Waxa kale ee aan si aad ah ugu boorinay qalabkan wixii xirmo badbaado ah.
badeecad aad u wanaagsan. mahadsanid
5 xiddigood. way wada shaqeyneysaa. bariga 27 maalmood ilaa kazakhstan
Si dhakhso ah ayuu u yimid, Tayada loo dulqaadan karo
Goaan wanaagsan, waqtigeygu safarka kujiraa.